Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): KIO,ဒုတိယဥက္ကဌ ၊ UNFC အဖွဲ. London ကို ရောက်ရှိ
at 5/20/2013 08:50:00 AM
KIO,ဒုတိယဥက္ကဌ ၊ UNFC အဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး အင်ဘန်လဦးဆောင်သော UNFC အဖွဲ့ တို့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊လန်ဒန်မြို့သို့ အင်္ဂလန် နှင့် မြောက်အိုင်ယာလန်တို့၏ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး၊ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပြသာနာများအားဖြေရှင်ပုံ အားလေ့လာရန် အတွက်
ယနေ့(19.5.2013)ရက်နေ့ London ကို ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
DU KABA NBAN LA, KIO NINGBAW MALAI, UNFC NINGBAW HTE RAU LAWM WA AI AMYU BAW SANG DAT KASA HPUNG NI DAI NA DE LONDON MARE DE ATSAM SHA DU WA LU SAI LAM CHYE LU.
bY: (Kachin Land)